जनकपुरधाम, १० साउन — सरोकारवाला निकायको लापरवाहीका कारण जनकपुर अञ्चल अस्पतालको आकस्मिक उपचार कक्ष बिरामी परेको छ । अस्पताल विकास समितिको लापरवाही र सरकारको उदाशीनताका कारण विपन्नहरुले उपचारको विकल्प रहेको अञ्चल अस्पतालको आकस्मिक अक्ष दयनिय बनेको हो ।
‘कुनैपनि अस्पतालको मुटु भनेको आकस्मीक कक्ष हो,’ जनकपुर अञ्चल अस्पतालको काकस्मीक कक्षका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर हाम्रो मुटु चाहिँ नाम मात्रैको छ । इमरजेन्सीमा आउने अधिकांश कर्मचारीलाई बाहिर रेफर गरिन्छ ।’
हरेक अस्पतालको आकस्मीक कक्षलाई सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न बनाइएको छ । आकस्मीक कक्षमा उपचार गरेपछि विरामीलाई अस्पतालको वार्डमा सारिन्छ । कोही निको भएर घर फर्कन्छन् । कोही त्यहाँबाट अर्कै अस्पतालमा रेफर गरिन्छन् ।
तर दुर्भाग्य, जनकपुर अञ्चल अस्पतालको आकस्मीक कक्षले चाहिँ विरामी आउने वित्तिकै अन्यत्रै रेफर गर्छ । आकस्मीक कक्षमा आउने विरामीलाई प्राथमिक उपचार गरेर बाहिरै रेफर गरिन्छ ।
सामान्य अवस्थाका विरामी बाहेक अरूलाई तत्कालै अन्यत्र रेफर गरिन्छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको संख्या पनि कम छ । ‘भएका डाक्टरहरुपनि निजी क्लिनिक र नर्सिङ होममा व्यस्त छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘भर्ना भएका विरामीलाई घन्टौ स्लाइन पानीको भरमा राखिन्छ । डाक्टर कति बेला आउँछन् थाहै हुँदैन ।’
यस्तो अवस्थामा विरामीको मृत्यु भएमा आक्रोशित आफन्तहरूले चकित्सकलाई हातै हाल्न समेत बेर लगाउँदैनन् । अञ्चल अस्पतालका कर्मचारीहरूका अनुसार यहाँ भर्ना हुन आउने विरामी आफैंले चाँडो रेफर चाहान्छन् । किनकी सबैले अस्पताल प्रतिको भरोसा गुमाइसकेका छन् ।
‘अञ्चल अस्पतालको इमरेजेन्सी वार्ड आफैंमा ‘इमरजेन्सी’ अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘राखिएका २० वटा शैयामा तन्ना सम्म पनि राखिएको छैन ।’ कर्मचारी र चिकित्सकलाई बस्नधरी कुर्सी समेत आकस्मीक कक्षमा छैनन् । डाक्टरको संख्या पनि कम छ ।
विरामी जाँच्ने उपकरण स्टेथोस्कोप (आलां) र विपी जाँच्ने मेसिन बाहेक इमरजेन्सी कक्षमा अन्य सामग्रीहरु उपलब्ध छैनन् । ती उपकरणहरु पनि धेरैजसो विग्रिएकै अवस्थामा हुनछन् । अस्पतालमा किनेर ल्याइने नयाँ सामा पनि गुणस्तरहीन हुने हुँदा धेरै नखप्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
अस्पतालमा भर्ना हुन आउने विरामीका आफन्तहरुलाई विचौलियाहरूले बाहिरै रेफर गर्न सुझाउँछन् पनि । बाहिर पट्टीका औषधि पसले, एम्बुलेन्स चालक र अस्पतालमा खटिएका स्वयमसेवहरूले आफन्तलाई डर देखाएर विरामीलाई अन्यत्रै रेफर गर्न लगाउँछन् ।
जनकपुर अञ्चल अस्पताल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष कामेश्वर झा भन्छन, ‘अस्पतालका कर्मचारीले कमिसनको लागि विरामी रेफर गर्न दलाली गरेका प्रमाण विगतमा पनि फेला परेका थिए, अझै पनि रोकिएको छैन ।’
जनकपुर अञ्चल अस्पतालले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो ४ बर्षमा कुल एक लाख एक हजार २ सय ४१ जना विरामीहरु आकस्मीक कक्षमा भर्ना भएका छन् ।
ती मध्ये ६ हजार ९ सय ९ जना विरामी अन्तैबाट रेफर भएर यहाँ आएका हुन् । अञ्चल अस्पतालको आकस्मीक कक्षमा आउने अधिकांशलाई बाहिरै रेफर गर्ने गरिएको छ ।
आइसियू संचालनमा नभएका कारण बाहिर रेफर
जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा पछिल्लो ४ बर्षमा ४ सय ७५ जना विरामीहरुको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । पछिल्लो ४ बर्षमा १ हजार ३ सय ५६ जना विरामीहरुलाई बाहिरको अस्पतालमा रेफर गरिएको छ ।
अस्पतालमा आईसियू सेवा संचालनमा नआउनाले बाहिर रेफर गर्नेहरूको संख्या बढेको हो । आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ को महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘आईसियू सेवा संचालनका लागि २० लाख ८५ हजार खर्च लगेता पनि आईसियू सेवा संचालन गरेको देखिएन । आईसियू सेवा संचालन गरी ती उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्थापन भईनसकेकाले संचालन हुन नसकेको पाइयो ।’
अस्पतालमा आईसियू संचालनका लागि करिब ३ बर्ष अघि नै भेन्टिलेटर सहित महँगा उपकरणहरु खरिद गरेर ल्याईयो । केही चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विकास समितिको तर्फबाट करारमा नियूक्ति पनि गरियो ।
चार जना मेडिकल अधिकृतहरुलाई करारमा नियूक्त गरेपनि आइसियु भने सञ्चालन गरिएको छैन । करारमा भर्ना भएका मेडिकल अधिकृतहरु मध्ये कोही थप अध्ययनका लागि त कोही लोक सेवा आयोग मार्फत अन्य ठाउँमा पदस्थापन भए ।
अहिले ती दरबन्दी खाली रहेका कारण आईसियू सेवा संचालनमा आउन सकेको छैन । अञ्चल अस्पतालका पुर्व मेसु डा. गौराङ्ग मिश्रले विकास समितिको तर्फबाट आईसियू संचालन गर्नका लागि ५ जना मेडिकल अधिकृत, ९ जना स्टाफ नर्स, ४ जना पारामेडिक्स, ४ जना स्वीपर र १ जना कम्प्यूटर अप्रेटर गरी कुल २३ वटा कर्मचारीहरुको दरबन्दी मध्ये ५ जना मेडिकल अधिकृत र ९ जना स्टाफ नर्सका लागि आवेदन फारम भर्न लगाई अन्तरवार्ता समेत लिईसकेका छन् ।
११ पुष २०७३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको राज्य मन्त्री स्तरीय निर्णय गरि अस्पतालमा विकास समिति अध्यक्ष मनोनयन नभएसम्म भर्ना नगर्नु भनेर निर्णय गरेपछि ती चिकित्सकहरुको नियूक्ति गर्न सकिएको थिएन ।
तर, अहिले जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा अस्पतालका पुर्व मेसु डा. बलराम मिश्र विकास समितिको अध्यक्षका रुपमा मनोनयन भईसकेका छन् । अस्पतालका प्रमुख मेसु डा. रामपरिक्षण यादव भन्छन, ‘विगतमा आह्वान गरिएको नियूक्ति प्रक्रिया गैरकानुनी थियो । अब आगामी ३ महिना भित्र नयाँ प्रक्रिया अपनाएर आईसियूका लागि आवश्यक दरबन्दीको पदपुर्ती गरी आईसियू सेवा संचालनमा ल्याईने छ ।’
साउन १०, २०७४ मा प्रकाशित
श्रीस्वस्थानी व्रत आजदेखि शुरु, किताबमा क्रिश्चियन धर्मकाे प्रचार काठमाडौं– प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूणिर्मादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म मनाइने घरघरमा श्रीस्वस्थानी व्रत सोमबारदेखि शुरु हुँदैछ स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बसी कथा भन्ने र सुनाउने गरे मनोकांक्...
मे दिवसमा तातोपानी नाका खोल्ने चिनियाँ तयारी
१२८ वर्षपछि वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा नर्सिङसेवा
प्रधानमन्त्री ओली दोहामा, राजदूत कोइरालाले गरे स्वागत
सरकारी कार्यालय एउटा पनि उच्च सुशासनयुक्त भेटिएन, महालेखा परीक्षक कार्यालय नै आश्चर्यमा